ESI GBANYỤỌ MKPỌCHI IHUENYO NA GAM AKPORO - A GAM AKPORO - 2019
Gbanyụọ mkpọchi ihuenyo na gam akporo
Ị nwere ike ịrụ ụka maka uru na ọghọm nke mkpọchi ihuenyo na gam akporo, ma ọ bụghị ihe niile ma ọ bụghị mgbe niile. Anyị ga-agwa gị otu njirimara a ga-enwe nkwarụ nke ọma.
Iji gbanyụọ usoro ọ bụla nke ihuenyo kpamkpam, mee ihe ndị a:
Gaa "Ntọala" ngwaọrụ gị.
Chọta ihe "Ihuchi mkpọchi" (ma ọ bụghị "Nchechi mkpọchi na nchekwa").
Kpatụ ihe a.
Na mpaghara a, gaa na sub-item "Mkpọchi ihuenyo".
N'ime ya, họrọ nhọrọ "Mba".
Ọ bụrụ na i debela paswọọdụ ọ bụla ma ọ bụ ụkpụrụ, ị ga-etinye ya.
Emere - mkpọchi ahụ agaghị adị ugbu a.
Dị ka ọ dị, ka ịhọrọ ọrụ a, ị ga-echeta paswọọdụ na isi ihe, ma ọ bụrụ na i tinyere ya. Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ịnweghị ike iwepu mkpọchi ahụ? Gụọ ebe a.
Ihe nwere ike ime na nsogbu na nsogbu
Njehie mgbe ị na-agbalị iji gbanyụọ ihuenyo, enwere ike inwe abụọ. Tụlee ha abụọ.
"Onye nchịkwa site n'aka onye nchịkwa, iwu nzuzo, ma ọ bụ ụlọ nkwakọba ihe data"
Nke a na - eme ma ọ bụrụ na ngwaọrụ gị nwere ngwa na ikike onye nchịkwa nke na - anaghị ekwe ka mkpọchi ahụ kwụsị; Ị zụtara ngwaọrụ eji, nke bụ otu ụlọọrụ otu ma ọ dịghị ewepụ ihe ọ bụla e ji ezoro ezo; Ị igbochiri ngwaọrụ gị site na iji ọrụ ọchụchọ Google. Gbalịa mee ihe ndị a.
Soro ụzọ "Ntọala"-"Nchebe"-"Ndị nchịkwa ngwaọrụ" ma gbanyụọ ngwa ndị a na-agbanye, gbalịa gbanyụọ mkpọchi ahụ.
N'otu paragraf ahụ "Nchebe" pịgharịa gaa ala ma chọta ìgwè "Nchekwa Nzuzo". N'ime ya, kpatụ ọnọdụ ahụ "Hichapụ nzere".
Ị nwere ike ịmalitegharịa ngwaọrụ ahụ.
Echefuru paswọọdụ ma ọ bụ igodo
Ọ dịrịrịrịrị siri ike - dịka iwu, iji nagide nsogbu dị otú ahụ adịghị mfe. Ị nwere ike ịnwale nhọrọ ndị a.
Gaa na ihuenyo ọrụ ọchụchọ Google, nke dị na http://www.google.com/android/devicemanager. Ị ga-abanye na akaụntụ ahụ ejiri na ngwaọrụ nke ịchọrọ ịkwụsị mkpọchi ahụ.
N'otu oge, na ibe, pịa (ma ọ bụ kpatụ, ma ọ bụrụ na ị si na ekwentị ọzọ ma ọ bụ mbadamba) na ihe ahụ "Gbochie".
Tinye ma kwenye paswọọdụ nwa oge nke a ga-eji maka unlocking oge.
Wee pịa "Gbochie".
Na ngwaọrụ ahụ, a ga-eme ka mkpọchi ntinye aka rụọ ọrụ.
Kpọghe ngwaọrụ, wee gaa "Ntọala"-"Ihuchi mkpọchi". O yikarịrị ka ị ga - achọkwa iwepụ asambodo nche (lee ihe ngwọta maka nsogbu mbụ).
Ihe ngwọta kasịnụ ma nsogbu bụ iji tọgharịa ntọala ụlọ ọrụ (anyị nwere ike kwado data dị mkpa ọ bụla o kwere mee) ma ọ bụ ikpuchi ngwaọrụ.
N'ihi ya, anyị na-ahụ ihe ndị na-esonụ: ọ kaghị ka akwadoro iji gbanyụọ ihe nchọgharị maka ihe nchekwa.